Home News Golaha Baarlabaanka JFS oo codsaday in uu hor yimaado RW Kheyre
Golaha Baarlabaanka JFS oo codsaday in uu hor yimaado RW Kheyre
Shirkii maanta ay ku yeesheen xildhibaanada Baarlabaanka JFS ayaa looga dooday arrimo xasaasi ah oo ay ugu horreeyso arrimaha amniga. Intii lagu guda jiray shirka ayaa waxaa guddoonka loo gudbiyay mooshin looga codsanayo in uu RW Kheyre ku hor yimaado golaha muddo 72 saacadood gudahood ah si wax looga weydiiyo arrimaha amniga oo gacanta ka sii baxay.
Hay’addii sirdoonka ee NISA ayaa gebi ahaanba la kala diray iyadoo hoggaankii sirdoonkana aay gebi ahaanba la wareegeen shaqsiyaad xiriir hoose la leh, horeyna uga tirsanaa Shabaab. Sida ay qorayaan wargeysyada caalamka waxaa Soomaaliya la wareegay koox argagixisada gacansaar buuxa la leh, taasoo keentay in wadamada reer galbeedka ah ee Soomaaliya ka shaqeeyay ay gebi ahaanba joojiyeen wada shaqeyntii iyo xog is dhaafsigii kala dhexeeyay sirdoonka Soomaaliya.
Wadamada Ingiriiska iyo Mareykanka aya ka mamnuucay in uu u yimaado Taliye Xigeenka NISA Fahad Yaasiin oo isku dayay in uu dhowr jeer la kulmo safaaradaha iyo sirdoonka reer galbeedka ah.
RW Kheyre aya la filayaa in uu ka soo jawaabo codsiga xildhibaanada isagoo laga codsdaday in uu ku horyimaado golaha muddo 72 saacadood gudahood ah.
Previous article Muxuu ahaa qorshahii laga lahaa in la qaarajiyo Xildhibaan Maxamed Mursal Boorow (War bixin)
Next articleONLFoo sheegtay in aysan Bedeli Doonin Go’aankooda
Xog Dhab ah: shan Qodob oo uu ku Fashilmay Madaxweyne Maxamed...